Tonga tany Espana ny Android One miaraka amin'ny Bq Aquaris A4.5 4G | Androidsis
Vao haingana izahay no nihaona tamin'ny Android One hipetraka amin'ny alàlan'ny BQ eto amin'ny firenentsika amin'ity volana septambra ity. Fantsona maromaro izay miaro manana fitaovana tsara sy vidiny lafo mba hahafahanao mahazo traikefa Android tsara ary misy karazana mpampiasa afaka manana ny tsara indrindra amin'ny tambajotra sosialy, fakan-tsary tsara indrindra na WhatsApp izay nanjary nilaina tato ho ato.
Bq Aquaris A4.5 4G dia misy famandrihana avy amin'ny Pccomponentes.com amin'ny vidiny € 169 ary azo alamina ho toy ny iray amin'ny fividianana tsara indrindra amin'izao fotoana izao, raha tsy te-handeha amin'ny telefaona Motorola sasany izay nitondra vidiny lafo na ireo sinoa avy lavitra, fa te-hiloka amin'ny finday izay ho iray amin'ireo fanavaozana voalohany ireo fanavaozana Android vaovao izay hiseho eto mandritra ny roa taona manaraka.
1 Android One no miandry anao
2 Famaritana ny Bq Aquaris A4.5 4G
Android One no miandry anao
A Bq Aquaris A4.5 4G izay dikanteny kely kokoa mihena amin'ny endri-javatra noho ny Bq Aquaris M4.5 niseho tamin'ny Jolay. Tsy midika izany fa tsy hanararaotra azy tanteraka isika, ny mifanohitra amin'izay no izy. Io Android One hita any Espana noho io terminal io dia hanana ny zavatra hanome antsika ny traikefa Android tsara indrindra amin'izao fotoana izao miaraka amina ROM madio izay mitondra ny tsara indrindra amin'ny endrika Lollipop.
Anisan'ireo mampiavaka azy RAM 1GB ary inona ny tahiry anatiny 16GB izany dia mety ho ampy mihoatra ny atiny multimedia rehetra tadiavinay. Efa nolazaiko fa ny iray amin'ireo hatsarany hafa dia ireo fanavaozana Google roa taona izay manana ny tsara indrindra amin'ny rindrambaiko, toy izany koa Marshmallow eo an-jorony fotsiny no ho ny kinova voalohany nosoratanao anarana rehefa nandoa ireo € 169 izay vidin'ny finday ireo ianao.
Famaritana ny Bq Aquaris A4.5 4G
Sarimihetsika IPS 4,5-inch miaraka amin'ny vahaolana qHD sy 244 ppi
Quad - fototra MediaTek MT6735M (Cortex A53) puce 1 GHz miaraka amin'ny ARM Mali T720-MP1 GPU
Fahatsiarovana anatiny 16 GB azo hatsaraina amin'ny alàlan'ny micro SD
Fakan-tsary 8 megapixel aoriana, autofocus, aperture F / 2.0, flash indroa
Fakan-tsary eo anoloana 5 megapixel misy flash
Fifandraisana: 4G LTE, Wi-Fi N, Bluetooth 4.0 ary GPS
Android kinova Lollipop
Refy: 63,48 x 131,77 x 8,75 mm
Milanja: 115 grama
Ny fahafaha-miasa dia amin'ny herinandro ho avy fa efa azonao atao ny mametraka azy io hitranga PCcomponentes.com. Afaka manakaiky kokoa ianao amin'izay tena akaiky an'ity programa ity amin'ny terminal Android One izay noheverina ho iray hampiharina amin'ny firenena an-dàlam-pandrosoana.
Amin'izay mbola ho hita eo izay ho vokatr'ity programa ity eto amintsika. Ny mazava dia maro no hisafidy ny hanana fanavaozana faran'izay haingana, izany fahatsiarovana microSD izany hanitarana ny fitadidiana, ary ireo fitaovana tsy dia ratsy akory. Ny iray hafa dia ny tombo-kase kalitao apetraky ny Bq amin'ireo terminal misy azy sy ny fanampiana arosony eto amin'ny firenentsika, iray amin'ireo fialantsiny tsara indrindra hahazoana azy io sy ho an'ny mpivarotra, ao amin'ny foibe fiantsenana lamaody, hahatonga ny nifinay hanaiky farany ny anao mividy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Bq » Bq Aquaris A4.5 4G, Android One dia efa any Espana
ANDROID ALERT !!: Ilay viriosy afaka manova ny PIN an'ny Android-nao